Miroborobo Ny Angovo Avy Amin’ny Masoandro, Saingy Hipaka Any Amin’ny Tena Mila Izany Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2016 7:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, Deutsch, Français, Ελληνικά, English
Ity lahatsoratr’i Didem Tali ity dia nivoaka voalohany tao amin’ny Ensia.com, gazetiboky manome lanja ny vahaolana ara-tontolo iainana iraisampirenena ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Amin'ny hadadasiky ny tany sy ny toerana misy azy amin'ny zanapehintany tropikaly, maro ny manampahaizana no mihevitra fa tena mety amin'ny firenena ny famokarana angovo avy amin’ny masoandro. Ny marina, nisy fanadihadiana nataon'ny Deloitte sy ny Fiaraha-mizotran'ny Indostria Indiana naminavina fa mety hahatratra hatrany amin'ny 749 gigawatts ny angovo avy amin'ny masoandro vokarin'i India – manakaiky ny avo telo heny amin’ny herinjiro efa voapetraka tamin’ny 2012 – ary nitatitra fa tsy ny iray isan-jaton’izany angovo azo trandrahana izany akory no voatrandraka.
Manezakezaka hentitra ny governemanta indiana hanafainganana ny fanomezana angovo avy amin'ny masoandro ao amin'ny firenena. Araka ny Bridge to India (Tetezana Mankany India), orinasan'angovo avy amin’ny masoandro miorina ao Delhi, dia antenaina hitombo hatrany amin'ny 250% ny orinasan'ny angovo avy amin'ny masoandro amin'ity taona ity, izay mametraka ny firenena ho ao anatin’ny iray amin’ireo firenena dimy voalohany erantany amin’ny famokarana angovo avy amin’ny masoandro. Vao avy nankato drafitra hampivelarana tanànan'angovon'ny masoandro miisa 50 indrindra ny governemantan’ny praiminisitra indiana Narendra Modi. Efa natsangana tao Cochin, fanjakana iray any atsimo-atsinanan'ny firenena indiana ny seranam-piaramanidina voalohany mandeha manontolo amin'ny herin'ny masoandro. Ary India no hanana tobim-pamokarana angovo avy amin'ny masoandro lehibe indrindra manerantany atsy ho atsy. Tamin'ny famelabelarana ny angovo avy amin'ny masoandro ho ” vahaolana tsara indrindra “ dia nanambara ny hanomezana herinjiro amin'ny Indiana rehetra i Modi ary niantso ny manampahaizan'ny firenena hampivelatra ny fitaovan'ny angovo avy amin'ny masoandro manana fahombiazana kokoa
Araka ny vondrona mpihevi-draharaha miorina ao Dehli antsoina hoe Ivontoerana Misahana ny Angovo sy ny Loharanompamokarana, dia olona 300 tapitrisa ao India no tsy mahazo herinaratra. Mety hanamora kokoa ny fanaovan'ny mpianatra entimody amin'ny alina ny angovo avy amin'ny masoandro, manampy ny mponina hifandray amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finday, sy maro hafa koa. Na izany aza dia nilaza i Engelmeier fa fanamby amin'ny angovon'ny masoandro ny mitsika mankany amin'ny mahantran'ny tanàna:
Raha voalaza izany, dia maro ireo fisantaran'andraikitra mikasa ny hahatonga ny mponina mahantra an-tanandehiben'i India hisitraka ny firoborobon'ny angovo avy amin'ny masoandro. Amin’ny alalan’ny tetikasa “Lighting a Billion Lives,” (Manazava ain'olona amina miliara), ny Ivontoerana Misahana ny Angovo sy ny Loharanompamokarana no efa nahazava tokantrano dimy hetsy, tsy ao India ihany, fa tany amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana 11 hafa ihany koa. Toa izany koa, ny Tahiry Fampivoarana Ny Fotodrafitrasa Madinika Maharitra dia manampy ara-bola, teknika ary ara-pandraharahana ireo orinasa madinika mpampitao angovo avy amin’ny masoandro. Nitsangana tamin’ny 2012 ny Pollinate Energy, orinasam-pandraharahana ara-tsosialy miorina ao Aostralia sy ao India, ary nahalafo tambajotram-pitaovana mampiodina ny angovon'ny masoandro tamin'ny fiaraha-monina mihoatra ny arivo.
Didem Tali dia mpanao gazety mahaleotena manokampahaizana amin'ny raharaham-pampandrosoana iraisampirenena. Mitatitra ny raharaha ara-toekarena, ny miralenta ary ny tontolo iainana avy ao Afrika, Azia, Eoropa ary any Afovoany Atsinanana izy. Manana ny diplaoma Master amin'ny media, fifandraisana ary ny fampandrosoana avy amin'ny London School of Economics izy ary misioka avy amin'ny @didem_tali.